Madaxweynaha Kooriya Waqooyi’ Kim Jong-un: “Ciidanka aan dhisayo waxa ay kahortagayaan daandaansiga Mareykanka”. | Dayniile.com
Home Warkii Madaxweynaha Kooriya Waqooyi’ Kim Jong-un: “Ciidanka aan dhisayo waxa ay kahortagayaan daandaansiga...
Madaxweynaha Kooriya Waqooyi’ Kim Jong-un: “Ciidanka aan dhisayo waxa ay kahortagayaan daandaansiga Mareykanka”.
Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa sheegay in uu dhisayo ciidan gaar ah oo ay adag tahay in xogtooda la ogaado kana hortaga duullaan weliba oo Mareykanka ku wajaho Dowladdiisa sida uu hadalka u dhigay.
Kim waxa uu sheegay in Dalkiisa siyaasad ahaan uu ku tallaabsaday horumar weyn, sameysashada hubka casriga ayuu ku tilmaamay mid uu uga gambanayo cadawga daneynaya in uu farageliyo waddankiisa.
Madaxweyne Kim Jong-un oo khudbad u jeediyay Ciidan soo bandhigay Gantaallo cusub oo Dowladdiisa sameysatay waxa uu kahor sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay awood u leedahay iska caabinta cid weliba oo duullaan la damacda.
Ujeedka sida is daba-joogga ah ay Dowladdiisa usoo bandhigeyso hubka Casriga ah ay sameysatay waxa uu ku sifeeyay mid ay ku dhaawaceyso niyadda Cadawga si uu ugu indha-sarcaado hubkaas sida uu hadalka u dhigay.
“Waxa aan ka gaashaamaneynaa Dagaal weliba oo dhanka Cadawga nooga yimaado, mar dambe kama hadli doonno daandaansi ama faragelin nalagu sameeyo waana in aan ilaalinaa qarankeenna” ayuu yiri Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi.
Mareykanka & Qaramada Midoobay ayaa walaac ka muujiyay hubka casriga ah ee aan xadidneen oo ay soo bandhigeyso Kuuriyada Waqooyi, Washington waxa ay xiriir la leedahay Kuuriyada Koofureed oo si dhaw ula wadaagto Macluumaadka dalka ay kala go’een.
Previous articleICJ rejects Kenya case in Somalia maritime border row
Next articleMuxuu ka yiri Guusha Laga Gaaray Badda Soomaliya Musharax Xasan Cali Kheyre
Askari ka tirsan Ciidanka Maamulka Puntland ayaa fal isugu jiray dil iyo dhaawac dad shacab ah ugu geystay agagaarka daarta Gaaca ee Magaalada Boosaaso...